10-KAAN FICIL HADAAD XAASKAAGA KULA DHAQANTO WAXAAD TAHAY SAY XUN. - Hablaha Media Network
10-KAAN FICIL HADAAD XAASKAAGA KULA DHAQANTO WAXAAD TAHAY SAY XUN.
HMN:- Nin kastaa maaha say xun, balse waxa jira waxyaabo aan fiicnayn oo uu sameeyo, loona baahan yahay inuu iska ilaaliyo si aannu guurkiisa u waxyeelin amma qoyskiisa u burburin, sababtoo xaaskaagu waxay u qalantaa inaad ula dhaqanto sida aad rabto in laguula dhaqmo.
Inta badan ha caaddaysan in aad xaaskaaga dhaleecayso amma eedayso badanaa, waxa wanaagsanaa in aad eegto waxyaabaha ay ku fiican tahay. Ku dhiirigeli wax kasta oo fiican oo ay samayso, waxa hubaal ah haddaad hadallada dhaawacaya qalbigeeda ka ilaaliso in ay ku jeclaanayso, kuna raalligelinayso.
Xakamaynta amma Kantaroolida joogtada
Rumayso amma ha rumaysan, inta badan adigu ma tihid ka saxan, waxana xaaskaaga quruxda badan u fiican in ay go’aannada u gaarka ah gaadho, waxa laga yaaba in go’aamo qurux badan ay soo saarto. Maskaxdaa ka saar in aad u baahan tahay maamuliddeeda ku saabsan goobaha ay tegayso, waxa ay qabanayso, waxa ay kharashgaraynayso iyo siday gurigeeda u maamulayso, halkii aad ka murugoon lahayd maaraynta nolosheeda waxa wanaagsan in aad si koox ah amma midaysan hawlaha u wada qabataan, is dhiirrigelisaan, is taageertaan, una ogolow xaaskaagu inay noqoto qofka ay tahay, siiyana baalal ay u duuli karto, hadday samaynayso waxyaabo aan ka baxsanayn diinta iyo karaamada bina’aadamka.
Inaad ula dhaqanto sidii ay tahay shay aad leedahay:
Xaaskaagu maaha alaab, waa ooridaadii, saaxiibkaaga ugu fiican iyo boqoradaada. Waxa ay u qalantaa ixtiraamkaaga ugu wanaagsan, gaar ahaan inaad baahi-tirto dhinac kasta oo u baahato oo xaq kuugu leedahay. Ixtiraamna sii shaqsi ahaan, in aad aaminsan tahay tus, guurka quruxda badana waa marka aad ula dhaqanto xaaskaasa si ixtiraam ku jiro, iyana ay ku qadariso.
Waqti oo aad la qaadan waydo:
Waxa tahay nin nasiib badan, sababtoo ah waxa aad leedahay oori, sidaa darteed ha ilaabin, hana ka mashquulin oo adduunyada ha ku ilaabin, marka aad ka raagto qoraalo jacayl u dir, telefoonka ka wac. Mar kasta oo aad aragto u sheeg inaad jeceshahay, hana dareento in ay tahay hadafka ugu weyn ee aad leedahay inay iyada tahay. Waxa aad kala xadaysaa waqtiga aad la qaadanayso iyo shaqadaada.
Luqad adag amma aflagaado ha kula hadal:
Marka aad say noqoto ma tihid wiil dhallinyaro ah, luuqadda xun ee aflagaadada ah kuuma wanaagsana, inta badan afkaaga ilaali. Waxaad ku deedaashaa in luuqadda adag ee bilaa naxariista ah aad ka fogayso ooridaada, aflagaadada iskaba daa hadalkeeda. Waxa jira kelmado kale oo wanaagsan oo aad odhan karto marka aad gurigaaga joogto, sababtoo ah waxay u qalantaa gabadha aad haweenka ka dooratay inay mashaqo kelmado aad u fiican oo afkaaga ka soo baxaya. Kelmado aad iyada u gaar yeesho ugu yeedh si ay u fahamto inay tahay boqoradaadii.
Inaad xaaskaga barbar-dhigto haweenka kale:
Shayga ugu fiican ee ay jeceshahay in xaaskaagu kaa maqasho waa ammaanteeda iyo inaad u sheegto quruxdeeda. Ha barbar-dhigin jidhka, khibradda iyo quruxda haweenka dariiqyada maraya, waayo arrintaasi waxay ku keenaysaa in ay murugooto, kana shakido in aanad dan ka lahayn.